Cwangcisa umda wokuvelisa ukutya kwenkukhu okuyi-1PTH
Ngomhla kaMatshi ,Oomatshini beVICTOR pellet banike umgca wokuvelisa ukutya kwenkukhu kumthengi waseAfrika,Indawo yaseMozambiki.it ikakhulu kukuvelisa ukutya kwenkukhu kunye nepellet.
Ngokubanzi, Inkqubo yokuvelisa ukutya kwenkukhu inamanyathelo alandelayo:
1.Ekuqaleni, Izinto ezingafunekiyo okanye izinto zokuzondla eziyimfuneko kwizilwanyana zixutywa zibe ngumgubo ngomatshini otyumkileyo, njengesidlo sembotyi yesoya, umbona, ingqolowa, imifuno kunye nezinye izinto
2.Ke, kumatshini wokudibanisa, Iipowder ezixutyiweyo ezingumgubo zixutywe ngokupheleleyo nenkqubo yemveliso yepellet kamva. Kule nkqubo, umsebenzisi unokongeza iiarhente zokongeza njengeevithamini, umgubo, ithambo kunye nenye into eyimfuneko yokulandela umkhondo
3.Okulandelayo, Izinto zokuxuba ezixutywe zingena kumatshini wokupheka wezinkukhu zenza umatshini ngokuhambisa. Ngaphantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu ngaphakathi kumatshini, Izixhobo ezikhutshiweyo ziprintelwe kwi-penst ephezulu yokuqina kobukhulu kunye nobume obufanayo.
4.Emveni kwalonto, Ukutya kwepellet okugqityiweyo kupholile kwaye kuhlolwa kumgangatho opholileyo wepellet kunye nomatshini wescreen wokupakisha kamva kunye nokugcina.
5.Ekugqibeleni, ngokusebenzisa ukupholisa kunye nokuhlola, i-pellet feed ingapakishwa kwiingxowa zokugcina. ibhegi ezipakishwe eziphathwayo ilungele ukuthengisa emarikeni.
Ukusuka kulo mthengi waseMozambiki, Sineenkcukacha ezithe kratya malunga nophuhliso lokutya kwenkukhu eMozambiki. Ngelixa ngokufunwa okuguqukayo kwenkukhu, Uhlobo lokondla ngokwendabuko alunakuhlangabezana nophuhliso lwangoku kunye nemfuno.
Ngenxa yesondlo esahlukileyo senkukhu kunye nenkomo, eyangaphambili ifuna ibango eliphezulu leprotein kwizilwanyana, isongezelelo seprotheni sithambela ngaphaya kwamanqanaba ezondlo, ngokunjalo phosphorus. Ukusetyenziswa kwe-nitrogen kunye ne-phosphorus kwifom yefomula epheleleyo iba yinto ebaluleke ngakumbi. Okokugqibela ifuna umgangatho wokuphakela ongafunekiyo.Ukutya okufumaneka kumdaka okanye kumdaka wengqolowa kungokunje kubangela uninzi lokutya okufumileyo, kodwa umgangatho wayo kunye nexabiso lokutya unokuhluka ngokubanzi. Emva koko iimfuno ezahlukeneyo zibuze iinkqubo ezahlukeneyo. Ngokwemeko yokwenyani kunye neemfuno,IVICTOR PELLET MACHINE isuswe umda kwimveliso yeenkukhu ezi-1PHT enesakhiwo esichanekileyo..
Emva kovavanyo lokuqhutywa komtya wokupheka wenkukhu okhethiweyo, Iziphumo zingaphaya kwesiphumo ebesilindelwe, kwaye umthengi usithumelele imifanekiso, ukuthi umgca wokuvelisa ukutya kweenkukhu kuyamangalisa, kwaye angathanda ukuseka omnye umatshini malunga nomtya wokuvelisa iintlanzi.